Jewelry Box - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
Yakasarudzika yakarongedzwa jewelry zvishongedzero dhiza bhokisi
Yakasarudzika yakarongedzwa jewelry zvishongedzero dhiza bhokisi Zvishongo zvebhokisi rezvishongo, rine mhando yakanaka, yakanaka pakatakura zvishongo sechipo. Dhizaina jewelry bhokisi, rinochinjika rakavhurika uye rakakwirira kirasi, Zvimwe zvinogona kukanganisa runako rwezvishongo. Chipo dhizaini bhokisi, rakakosha...
Kadhibhokisi Bhokisi neakarasikirwa neRide Yezvishongo Packaging
Kadhibhokisi Bhokisi neRinorasikirwa neRide Packaging Kadhibhodi Mhete Bhokisi, mhete bhokisi rine chivharo, yakakwirira yemhete kurongedza bhokisi. Chipo chemhete bhokisi, rakakosha dhizaini ine logo yakadhindwa, yakashongedzwa uye yakanaka. Mhete yekuisa mhete bhokisi, zvipo bhokisi remhete, yakagadzirirwa saizi uye...
Anoshamisira kadhibhodi zvishongo zvinorongedza chipo logo bhokisi
Anoshamisira kadhibhodi zvishongo zvinorongedza chipo logo bhokisi Zvishongo zvekuisa bhokisi, bhokisi rezvipo zvebhokisi zvishongo, yakakwirira kirasi uye yepamusoro mhando. Kadhibhodi zvishongo bhokisi, tsika yakadhindwa pabhokisi bhokisi rine yakanaka giredhi zvinhu. Pepa bhokisi rine logo rakadhindwa, rinogona...
Mafashoni ekupeta mapepa ezvishongo kurongedza nemagineti
Mafashoni ekupeta mapepa ezvishongo kurongedza nemagineti Pepa kupeta zvishongo bhokisi, kupeta bhokisi rezvishongo, ine inopisa foil logo uye nzvimbo UV. Zvishongo kupeta bhokisi, pepa jewelry zvishongo bhokisi nemagineti neribhoni, yakakwirira mhando. Folding bhokisi nemagineti, zvishongo zvinorongedza kadhibhokisi...
Pepa dhizaini inotsvedza bhokisi yezvishongo zvechipo
Min. Raira: 1000 Bag/Bags
Pepa dhizaini inotsvedza bhokisi yezvishongo zvechipo Rigid pepa rekushongedza bhokisi bhokisi rine mhando yepamusoro yakazara chivharo chakapetwa kudhinda kwekushongedza kwezvishongo Dhizaina jewelry bhokisi nePU puller, anogona kuvhura bhokisi zviri nyore Liyang Pepa Zvigadzirwa Co, Ltd, yakagadzikwa muna1999, paine...
Packaging dhizaina mucherechedzo neyezvishongo
Packaging dhizaina mucherechedzo neyezvishongo Dhirowa bhokisi rezvishongo, zvishongo zvekurongedza bhokisi, dhiza bhokisi rine logo . Chigadzirwa dhizaini bhokisi Zvishongo zvinotakura dhiza bhokisi, kadhibhokisi bhokisi, zvoumbozha uye fashoni . Tsvaga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wakanaka, enda mberi...
Fashoni kadhibhodi kupeta bhokisi bhokisi kupfeka
Fashoni kadhibhodi kupeta bhokisi bhokisi kupfeka Garment ekutakura mabhokisi, kupeta bhokisi senguo, zvishongo, cosmetic ... zvese zvinoratidzira zvakakodzera . Garment yekupinda bhokisi, yakasvibirira dhizaini uye yakanaka mhando, ratidza yako kambani chimiro. Folding bhokisi rezvipo, zvipo zvekuisa bhokisi rine...
Zvishongo kutakura akatenderedza chipo bhokisi pamwe nekuisa
Zvishongo zvinotakura bhokisi rakatenderedzwa pamwe nekuisa Round jewelry zvishongo, zvishongo zvekurongedza bhokisi rine logo rakadhindwa, hwakanaka . Zvishongo zvinotenderedzwa bhokisi, rinotenderera bhokisi rezvishongo, nekupedzisa rakadhindwa richava sarudzo iri nani. Round zvipo mabhokisi, chigadzirwa kurongedza...
Zvishongo Zvekurongedza Bhokisi reCustom Logo neDhirowa
Bracelet Packaging PU Leather Jewelle Chipo Bhokisi Yejecha Bhokisi rine dhirowa mhando yekushongedza zvishongo; Yakadai jewelry jewelry pabhokisi bhokisi gamuchira tsika logo kudhinda kana sirivha chitambi. Mukati velvet pouch yezvishongo akachengeteka akabata. Ruvara rwepink offset rinodhinda ruvara pepa jewelry...
Cosmetic zvishongo kutakura zvipo dhiza bhokisi
Cosmetic zvishongo kutakura zvipo dhiza bhokisi Cosmetic zvipo kurongedza bhokisi, cosmetic bhokisi kurongedza, zvipo bhokisi dhizaini bhokisi . Chishongo chechipo dhizaini bhokisi, zvishongo bhokisi nesilika, tsika yakadhindwa logo uye dhizaini. Zvigadzirwa dhiza dhiza, yepamusoro mhando yezvigadzirwa kutakura,...
Nzeve zvishongo mapepa ekutakura zvipo bhokisi
Nzeve zvishongo mapepa ekutakura zvipo bhokisi Mhete pacakging bhokisi , rakagadzirwa rakakurumbira kutenderera bhokisi dhizaini, chivharo uye base bhokisi, bhokisi rakapetwa bhokisi, bhuku rakavezwa bhokisi uye zvichingodaro zvakare nesarudzo yako. Mhete dzechishongo bhokisi neasilika ribhoni kushongedza kuita kuti...
Kadhibhodi rezvipo bhokisi kurongedza neribhoni
Kadhibhodi rezvipo bhokisi kurongedza neribhoni Zvipo zvekuisa mabhokisi, zvigadzirwa zvekutakura bhokisi, zvemhando yepamusoro uye yakaderera mutengo . Zvipo mabhokisi ane ribhoni, zvipo bhokisi kurongedza, ribhoni nguva dzose inobata vanhu maziso. Packaging zvigadzirwa bhokisi, yakagadzirirwa saizi uye dhizaini,...
Zvishongo zvinotakura dhiza bhokisi nevharo yekuisunga
Zvishongo zvinotakura dhiza bhokisi nevharo yekuisunga Kadhibhokisi bhokisi rine kuisa, dhiza bhokisi rine chivharo, kadhibhokisi bhokisi rine lid, cosmetic yekuisa bhokisi . Zvishongo zvebhokisi rezvishongo neyekuisa, zvishongo zvekuisa bhokisi, zvipo zvebhokisi. Dhirowa bhokisi rine lid, dhiza bhokisi rekushongedza...
Tsika pepa jewelry zvishongo chengetedza zvipo zvebhokisi
Tsika pepa jewelry zvishongo chengetedza zvipo zvebhokisi Pepa jewelry zvishongedzo bhokisi , rakagadzirwa muiri nyore chivharo uye base bhokisi dhizaini, denderedzwa bhokisi, rakapetwa foldable bhokisi, bhuku rakaumbwa bhokisi uye zvichingodaro zvakare nesarudzo yako. Zvishongo zvekuchengetedza bhokisi nechena...
Yakazara ruvara yakadhindwa zvishongo dhiza dhiza chipo bhokisi
Yakazara ruvara yakadhindwa zvishongo dhiza dhiza chipo bhokisi Chishongo dhiza dhizaina , rakagadzirwa mune inozivikanwa dhiza dhiza dhizaini, denderedzwa bhokisi, rakapetwa foldable bhokisi, bhuku rakaumbwa bhokisi uye zvichingodaro zvakare nesarudzo yako. Yakazara ruvara yakadhindwa zvishongo bhokisi nebhokisi...
Zvidiki glossy zvishongo chipo pepa pilo bhokisi
Zvidiki glossy zvishongo chipo pepa pilo bhokisi Diki Piro Bhokisi rakagadzirwa mune 350gsm art pepa, yakapfava maitiro bhokisi rekutakura zvipo Chidakadaka Chipo chiisa pilo bo x, yakazara mavara anodhinda kudhinda nekupedza glossy Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd ndeye fekitori uye yekutengesa kambani iri...
nhema yakadhindwa chena yakakura yakapetwa mbambo bhokisi
nhema yakadhindwa chena yakakura yakapetwa mbambo bhokisi Yakakura mbiru Bhokisi rakagadzirwa mune 400gsm matt uncoated pepa, yakapfava maitiro bhokisi rekutakura zvipo chena ichipeterwa mbambo bhokisi , ine logo yako mukudhinda kweatema Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd ndeye fekitori uye yekutengesa kambani iri...
Yakachipa yezvizere zvipo mapepa ebhokisi ezvishongo zvishongo Yakachipa Chipo Mapepa Mabhokisi, mutengo unodhura uine yakakwirira mhando. Yepepuru Pepa Bhokisi ine logo yakadhindwa, yakazara neako compant ficha. Yakachipa Yakanyanya Chipo Bhokisi ine yakagadzirirwa saizi uye dhizaini, yakanaka giredhi. Liyang Pepa...
Mwoyo Rakaumbwa chokoreti Chishongo bhokisi revakadzi
Mwoyo Rakaumbwa chokoreti Chishongo bhokisi revakadzi Mwoyo wakaumbwa chokoreti bhokisi gamuchira yakarongedzerwa yako pachako logo uye dhizaini dhizaini, yakadaro Yejecha bhokisi yevakadzi Fancy chimiro jewelry bhokisi ne elegante moyo chimiro chechipo chekutakura icho chinokodzera kutumira chipo kune iye waunoda.
Zvigadzirwa zvitsva zvipo kadhibhodi kurongedza dhiza bhokisi
Zvigadzirwa zvitsva zvipo kadhibhodi kurongedza dhiza bhokisi Chipo kadhibhodi kurongedza dhiza bhokisi, pink ruvara dhiza bhokisi ne matte lamination, yakasarudzika uye fashoni . Chipo chinotakura dhizaini bhokisi, zvishongo zvekurongedza bhokisi nekuisirwa, zvinogona kuratidza zvigadzirwa zvako mushe. Chipo...
Yakagadzirwa yakagadzirwa mapepa ekutsvedza dhiza dhizaini
Yakagadzirwa yakagadzirwa mapepa ekutsvedza dhiza dhizaini Packaging bepa rinotsvedza dhiza dhiza, pink ruvara dhiza bhokisi ine matte lamination, yakasarudzika uye fashoni . Packaging anotsvedza dhiza dhiza, jewelry zvishongedzo bhokisi nekuisirwa, anogona kuratidza zvigadzirwa zvako mushe. Packaging bepa dhizaini,...
Mhando nhema nhema kurongedza pepa bhokisi nedhirowa
Mhando nhema nhema kurongedza pepa bhokisi nedhirowa Packaging pepa bhokisi nedhirowa, yependi ruvara dhiza bhokisi ine matte lamination, yakasvibirira uye fashoni . P ackaging bhokisi ne drawe r , zvishongo zvekutakura bhokisi nekuisa, zvinogona kuratidza zvigadzirwa zvako zvakanaka. P aper bhokisi ne drawe r , zvipo...
tsika logo uye emboss maitiro emagetsi ezvishongo bhokisi
Yakasarudzika tsika magnetic foil kurongedza cosmetic bhokisi
Pepa Corrugated Pizza Bhokisi neCustom Logo Yakadhindwa
Tsika Pepa Mabhokisi Machena Leather Perfume Bhokisi Kudhinda
bhuku pepa bhokisi rine hwindo eyelash yenhema
Yakagadzirwa Yakagadzirwa Kadhibhodi Ruva Bhokisi netambo tambo
Rose Goridhe Magnetic Kuputira Chipo Bhokisi neRibbon
Packaging bhokisi re eyelash rine hang hole
Hombe Huru Bhokisi Magnetic Chipo Mabhokisi Wholesale
Pepa Red Round Chocolate Bar Packaging Bhokisi
Ruviri ruva bhokisi mutsipa kana chindori chemukadzi
Anonhuwirira echipo chinonhuwira bhokisi kurongedza
Jewelry Box Jewellery box jewelry box Jewelry gift box jewelry Paper jewelry box Jewelry box with logo Hinged Jewelry Bhokisi